La kulan Sargaal 17 maalmood Al-Shabaab ka dhuumanayay isagoo dhaawac ah | KEYDMEDIA ONLINE
La kulan Sargaal 17 maalmood Al-Shabaab ka dhuumanayay isagoo dhaawac ah
Mid ka mid ah Siddeed sargaal oo lagu waayay dagaal dhex maray ciidanka Kenya iyo Kooxda Al-Shabaab labo todobaad ka hor ayaa dib loo helay, wuxuuna dib ugu soo laabtay xeradiisii, isaga oo dhaawac ah.
LAMU, Kenya - Norman Mwongera, oo ah sarkaal booliis ah oo la waayey laba toddobaad ka hor, loona qaatay inuu ku geeriyooday dagaal uu la galay Al-Shabaab, ayaa dib loo helay 17 maalin kadib.
Ciidanka howlgallada gaarka ah ee Kenya, ayaa duullaan ku qaaday rag ka tirsan Al-Shabaab, kadib markii 17-kii May, lagu arkay Koox si xooggan u hubysan oo ku dhuumaaleysneysa degaanka Mangai.
Howl-galka, ayaa cuslaaday waxaana lagu qasbanaaday in la dajiyo diyaaradihii howl-galka qeybta ka ahaa, Saraakiisha ayaa ku kala dhumay keymaha, waxaana intii uu socday dagaalka la xaqiiyiyay labo sargaal oo ka tirsan booliiska Kenya.
Siddeed Sargaal, ayaa la waayay, waxaana loo fishay in ay geeriyoodeen, hayeeshee, arrinta layaabka noqotay ayaa ah, in la helay Norman Mwongera, oo ah sarkaal booliis ah, kadib 17 maalin dagaalka.
Mwongera ayaa Arbacadii oo ku beegneyd 2-dii bishaan Juun, ku laabtay xeradiisa Basuba GSU oo ku taalla degaanka Lamu, abbaaro 9:40 Am, waxuuna ahaa dhaawac la dhibaatoonaya rasaas kaga dhacday bowdada iyo gacanta.
“17-ka maalin ee uu maqnaa, wuxuu ku dhuumaaleysanayay keymaha isagoo dhaawac culus ah, wuxuu soo maray nolol adag oo cabsi badan”. Ayuu yiri mid ka mid ah saraakiishii ka soo carartay oo magaciisa la qariyay.
Norman Mwongera, saaxiibadiis ayaa si weyn u soo dhaweeyay, kuna farxay noloshiisa, waxaase wali meel ay jaan iyo cirib dhigeen la la’yahay todobo Sargaal, oo raqdooda iyo ruuxoda la la’yahay muddo ka badan labo isbuuc.